MACLUUMAADKA TARANKA NOOLAHA EE PLOTT HOUND DOG IYO SAWIRRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Noolaha ee Plott Hound Dog iyo Sawirro
Kani waa Duke the Plott Hound oo jira 12 bilood, miisaankiisu yahay 75 rodol!
Shirqoollada loo yaqaan 'Plott Hound' waa eey dhexdhexaad ah, xoog badan, oo muruqyo leh. Dhakada ayaa si dhexdhexaad ah u fidsan oo leh maqaar si fiican loo xiray. Afku waa dhexdhexaad dhexdhexaad ah oo leh ubaxyo ka dhigaya mid laba jibbaaran. Dibnaha iyo sanku waa madowyihiin. Indhaha caanka ah waa bunni ama hazel oo leh qarka isha madow. Dhegaha sudhan waa ballaadhan yihiin oo dherer dhexdhexaad ah. Dabada dhaadheer ayaa ka hooseeya safka kore. Cagaha adag waxay leeyihiin suulasha suulasha. Koodhku waa gaaban yahay, siman yahay, ganaax iyo dhalaalaya. In kasta oo inta badan jaakadaha loo yaqaan 'Plott' ay yihiin kali, haddana waqti ka waqti ayaa jubbadda laba jibbaaran ay dhici kartaa. Midabada koofiyaddu waxay ka kooban yihiin hoos kasta oo gogol-xaar ah, madow adag, gogol leh sarkaal madow, madow leh gogo 'goind, iyo buckkin dhif ah. Waxaa jiri kara xoogaa cadaan ah oo ku wareegsan laabta iyo cagaha.
Noocani wuxuu sameeyaa wehel wanaagsan. Daacadnimo iyo caqli badan, Plott Hound waa dhakhso wax loo barto, dhaqso u jeclaada oo carruurta ku wanaagsan. Dabeecaddeeda shakhsiga ah hubaal kama muuqato raadadka. Ugaadhyahan-kulankaan weyn iyo scenthound wuxuu leeyahay geesinimo weyn. Go'aamisay, geesinimo iyo sharaf leh, waxay ku ciyaari doontaa digaag leh orso 500-rodol ama duurjoog, xanaaq caro leh. Shirqoolku wuxuu leeyahay cod aad u xiiso badan oo fiiqan, oo ka duwan dhawaaqa qulqulaya ee caanka ku ah dadka kale ee coonhounds. Bulsho noocani markuu yaryahay hubi inaad baraan adeecid fudud sida socodka xadhig . Shirqoollada ayaa u muuqda dhibic iyo caajis . Waxay u baahan yihiin a adag, laakiin deggan , ku kalsoon, maareeye joogto ah. Ku habboon canine ilaa isgaarsiinta aadanaha waa lagama maarmaan.
Dhererka: 20 - 25 inji (51 - 63 cm)
Miisaanka: 40 - 75 rodol (18 - 34 kg)
Khadadka qaarkood ladayacayo waxay soo saarayaan eeyo waaweyn.
Plott Hound waxaa loo tixgeliyaa midda ugu adag Waxay cuntaa tiro badan oo cunto ah si dhakhso ah, taas oo ka dhigaysa mid u nugul darsanka caloosha iyo nafta khatar gelinta ee caloosha. Ha jimicsi eeygan kadib cunno weyn.
pictures of muqisho apso lhasa
Plott Hound laguma talinayo nolosha guriga. Waxay ku noolaan kartaa oo ku seexan kartaa banaanka haddii ay leedahay hoy ku habboon. Tarankaani wax macno ah oo waddo ma leh haba yaraatee waana in lagu hayaa meel aamin ah maxaa yeelay waxay u janjeersataa inay warwareegto.
Plott Hound wuxuu ubaahan yahay jimicsi fara badan, oo ay kujiraan maalinle, dheer, deg deg ah socod ama orod. Inta lagu jiro socodka eeyga waa in loo sameeyaa ciribta dhinaceeda ama gadaashiisa qofka haya hogaanka, sida maskaxda eeyga maskaxdiisa hogaamiyaha ayaa hogaaminaya wadada, hogaamiyahaasina wuxuu ubaahan yahay inuu noqdo aadanaha. Eygan muruqsan ee aad u jilicsan ee jilicsan ayaa leh adkeysi iyo adkeysi uu ku shaqeynayo maalinta oo dhan iyo sidoo kale habeenka. Plott Hound waa inuu helaa fursado uu ku ordo, laakiin wuxuu ku dhashay ugaarsade dabiici ah wuxuuna leeyahay u janjeera inuu ka cararo oo ugaarsado haddii aan lagu hayn meel sifiican loo deyriyay inta leyliska laga dhaqaaqayo.
Qiyaastii 5 ilaa 8 eey
Koodhka gaaban ee loo yaqaan 'Plott Hound' way fududahay in la xannaaneeyo. Shanlo oo cadayo marmar si aad timaha dhintay uga saarto. Hubso dhegaha badiyaa si aad u hubiso in ay nadiif yihiin oo aan infakshan lahayn. Ugaadhsiga ka dib waa in laga hubiyaa ciddiyaha jeexjeexan, cagaha oo lugaha ku kala qaybsan, dhegaha oo jeexan, iyo boodada iyo shilinta.
Plott Hound waa xayawaanka kaliya ee Mareykanka ee aan lahayn abtirsiinta Ingiriiska. 1750 Jonathan Plott iyo walaalkiis waxay ka baxeen Jarmalka iyagoo ku sii jeeda America. Waxay sii kaxeysteen shan Hanoverian Hounds. Jonathan Plott walaalkiis wuxuu ku dhintay safarka laakiin Jonathan wuxuu degay North Carolina. Halkaas ayuu qoys ku soo koray oo eey ka soo saaray. Isku darka Dhiig-baxa iyo Habaarka ayaa lagu soo waramayaa inuu ka kooban yahay asalka asalka ah. 200-ka sano ee soo socota eyda waxaa soo koriyey jiilal ka mid ah xubnaha qoyska Plott waxaana loo yaqaaney ugaarsigii Plott. Eeyadu waxay ka shaqeeyeen ugaarsiga orsada iyo rakoon ee Appalachian, Blue Ridge iyo Buuraha Weyn ee Qiiqa weyn ee bariga Mareykanka. Qoyska Plott ayaa si dhif ah u galiyay eeyaha suuqa si ay ugu yaraadaan meel ka baxsan koonfurta Mareykanka. Eeyaha ayaa markii ugu horreysay 1946 waxaa aqoonsaday Naadiga loo yaqaan 'United Kennel Club'. Shirqoollada ayaa adag oo leh dareen ugaarsi ugaarsi ah. Waxay wax ku ool u yihiin raadinta kooyo, yeey iyo daaqda duurka. Taranka ayaa si taxaddar leh loo soo saaray si uu u sii xoogeysto oo u sii jiro. Waxay awoodeen inay samaystaan ​​asxaab qoys oo wanaagsan laakiin marar dhif ah baa sidaas lagu hayey, maadaama milkiilayaasha badankood ay heleen eeyaha ugaarsiga. Sannadkii 2006-dii ayaa si rasmi ah ay AKC u aqoonsadeen 'Plott' oo hadda loo soo bandhigay sida eey show ah, laakiin waxaa jira kuwa badan oo wali ugaarsada una soocaa iyaga sida eeyaha ugaarsada.
korinta qashin eeyo ah
SnoopDogg Plott Hound oo qiyaastii ah 7 sano jir— 'Snoop iyo aniga waxaa naloogu talagalay inaan wada joogno. Waxaan kaliya lumiyay a Rhodesian Ridgeback oo aan eey lahayn. Weligay waxaan ahaa qof dabacsan. Snoop wuxuu taagnaa dhexda laba waddo weyn oo haad ah bartamaha meel aan ka jirin NM. Ma uusan lahayn wax qoorta ah wuxuuna dul taagnaa meydka eey nooc kale ah. Sababtoo ah way iska cadahay inuu bahal ahaa, ma garanayo haddii eeyga dhintay uu ahaa saaxiibkiis ordaya ama qado. Eyga kale waxaa lagu dhuftay gaari. Waxaa jiray qaybo gawaari ah oo wadada oo dhan ah gawaarida iyo gawaarida xamuulkuna way jilaabayeen iyagoo aan xitaa gaabin. Waxay ahayd inaan isku dayo oo aan soo qabto. Waqti yar ayaan qaatay maxaa yeelay wuxuu ka baqayay inuu dhinto laakiin ugu dambeyntii waan qabtay gacmahayga. Waxaa lagu daboolay qarqaryo wuxuuna ahaa maqaar iyo lafo. Waxaan u maleynayay inuu yahay cirro cirro maxaa yeelay dabadiisa ayaa si adag caloosha hoosteeda loogu soo xiray oo qaabkiisu u eg yahay a cawl . Madaxiisa, in kasta oo uu wada ahaa coonhound. Waan ku guuleystey inaan geliyo kursiga dambe ee gaari xamuul ah oo aan geeyay guriga. Waligiis waligiis gaari ma uusan fuulin oo wuu gariirayaa oo argagax ayaa ku dhacay. Markaa way iska cadahay inuusan waligiis guri joogin ka hor midkoodna. Waxaan bilaabay isla markiiba jabinta guriga. Wuxuu galay hal qalad waligiisna ma uusan galin mid kale. ''
SnoopDogg Plott Hound oo qiyaastii ah 7 sano jir— Maalintii xigtay, waxaan u qaaday dhakhtarka xoolaha. Dhakhtarka xoolaha ayaa yiri wuxuu ahaa Plott Hound wuxuuna u maleynayay inuu jiro qiyaastii 4 ama 5 bilood. Wuu ka baqay inuu dhinto! Dhakhtarka xoolaha ayaa yiri wuu qalbi jabsan yahay waana inaan sameeyaa is dhexgal isaga oo ku quudiya inuu miisaanka saaro. Markii uu ku soo laabtay miisaankiisii ​​caadiga ahaa, dhakhtarka xoolaha ayaa jadwalkiisa taxan iyo dhexdhexaad ah isaga. Meel walba waan geeyay. Waxaa lagu daray sinta Muddo ka dib, xattaa uma aanan baahnayn xargo marka aan magaalada ku jirno mooyee. Haddii kale, waxaan u maleynayaa inuu aad uga baqay inuu lumiyo oo aanan ruxin karin haddii aan doono. Bulsheynta ayaa qaadatay muddo waxayna socotaa inkasta oo ay lix sano jirsatay. Weli kuma qanacsana ragga, inkasta oo uu aakhirka kululaan doono. Xaqiiqdii waa nooc jireed oo nin ah oo uu aad uga baqo, sidaa darteed waxaan u maleynayaa inay tahay inay la xiriirto duufaantii uu ku daboolay. Wuu la qabsadaa bisadaha iyo eeyo kale oo jecel carruurta. Isaga ayaa ka fiican ilaalinta khayraadka (cuntada) welina kuma ciyaari doono toy. Waxaan aaminsanahay inuu ahaa laga saaray walaalihiis iyo hooyadiis goor hore waligeedna ma helin tababbar muhiim u ah in eeyaha oo dhami ay wax ka bartaan asxaabtooda qashinka ah. '
eyga ugaarsiga madow iyo caddaan
SnoopDogg Plott Hound oo qiyaastii ah 7 sano jir— 'Arrintiisa ugu weyni wali waa dhawaqa rasaasta ama baabuurta dib loo ridayo. Weli wuxuu hayaa weeraro argagax leh halkaas oo ay tahay inuu tago meel mugdi ah oo xasilloon oo uu ku dhuuman karo ilaa uu ka nasto. Wuxuu sariirteyda hoosta ka geli jiray oo suuxi jiray, ruxin jiray oo hoos u ridi jiray. Waxaan isku dayay inaan sariirta la hoos galo oo aan u sheego inay caadi tahay ... ooops! Waxaan daawanaayay Cesar Milan waligayba waxaana igu dhacay dhacdo uu kula dhaqmay cabsi iyo eey argagaxsan . Adoo sariirta hoosta la galaya Snoop si aan isugu dayo una dejiyo, waan ahaa quudinta dhaqanka ... wuxuu helayay feejignaan ah inuu sidaa u dhaqmo ... sidaas darteed waan joojiyay feejignaanta oo dhan waqtigaas oo waxaan u ogolaaday inuu wax ka qabto. Markii uu dareemay raaxo inuu ka soo baxo meeshuu ku dhuumaalaysanayay, ka dib waxaan siiyay feejignaan badan ... Weli way dhacdaa, laakiin isagu uma baahna inuu mar dambe sariirtayda hoos maro. Hada wuu fiicnaan karaa inuu sariirtiisa jiifto ka dibna wuu ila hubiyaa markuu sheekada dhammeeyo. Waxaan jeclaan lahaa inaan ka caawiyo sidii uu uga bixi lahaa cabsidan, laakiin waqti aad u dheer ayay qaadatay xilligan oo aan ka shaki qabo haddii ay weligeed gebi ahaanba baaba'ayso. Wuxuu ku raaxeeyaa tagista baarkinka eeyga. Qof walba wuu la kulmaa wuuna salaamaa wuuna iska ilaaliyaa eeyaha aan degganeyn - keligiis Isagu waa majaajiliiste wuxuuna ka qosliyaa qof kasta oo beerta jooga. Qof walba wuu garanayaa magaciisa. Isagu aad buu ilaaliyaa aniga, wali wuxuu jecelyahay inuu u ciyaaro sida eey oo kale waxaanan ilaahay ugu mahadnaqayaa maalin kasta oo aan ku dhaco wadada weyn ee NM maalintaas. '
Augie the Plott Hound at 3 1/2 sano jir— 'Augie ayaa noloshayda cusub la keenay. Isagu waa macaan yahay, caqli badan yahay oo wuxuu jecel yahay inuu ku fadhiisto sariirta sariirta! Wuxuu jecel yahay inuu ku ordo barafka iyo raacida gaariga. '
Guszilla aka Gus the Plott Hound at 1 sano jir, miisaankiisu yahay 110 rodol!
Guszilla the Plott Hound at 3 sano jir, culeyskiisuna dhan yahay 137 rodol! 'Isagu waa nin jilicsan, oo saaxiibtinimo leh oo sida laabta laabta ah.'
Bailey Shirqoolkii Dhagarta
Kani waa Loki, waa 14 bilood Plott Hound oo laga soo badbaadiyay SPCA.
sawirada coton de tulear
Lahaanshaha sawirka 'Pride Plotts'
Eeg tusaalooyin badan oo ka mid ah Shirqoolka Hound
Sawirada Plott Hound 1
rumaanka iyo pekingese isku dhafka ah eeyo yaryar oo iib ah
waa maxay mastiff tibetan ah oo lagu qasay
eeyo doxie pin ah oo iib ah
heeler iyo collie xadka isku darka